WWE Champions 2019 0.375 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.375 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ WWE Champions 2019
WWE Champions 2019 ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
WWE ဂိမ်းက download NEW WWE ချန်ပီယံလိဂ် 2019. အဆိုပါ # 1 မှာ 35 သန်းပရိတ်သတ်တွေကျော် Join Play ။
အသစ်က PvP ထိပ်တိုက်တွေ့တူသော NEW features တွေ, အဆင့်မြင့်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်-ထက်အစဉ်အဆက် In-လက်စွပ်အရေးယူခံစားပါ။ နောက်ဆုံးစူပါစတား & All-အချိန်မဟာရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူထိပ်ရန်သင့်လမ်းတိုက်ဖျက်။ mens, မိန်းမနှင့်ရောနှောပြိုင်ပွဲအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ တစ်ကိုယ်တော် Play တစ်ခုသို့မဟုတ်အဖွဲ့ခွဲ join ။ ဦးဆောင်တောင်တက်ရန်ပဟေဠိ RPG တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်စစ်တိုက်။ Wrestlemania ဖို့လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် WWE ဠာ၏စိတ်လှုပ်ရှားခံစား!
** WINNER! 2018 Webby ပြည်သူ့ Voice ကိုဆုချီးမြှင့် (အားကစားဂိမ်းများ) **
=== GAME အင်္ဂါရပ်များ ===
NEW WWE ချန်ပီယံ 2019 UPDATE
* NEW PvP ထိပ်တိုက်တွေ့
* NEW PvP ထိပ်တိုက်တွေ့ဆိုင်
* Enhanced ဂရပ်ဖစ် & animations တွေကို!
* နယူးစူပါစတား & Legends လစဉ်လတိုင်း
NEW! PVP ထိပ်တိုက်တွေ့
* ကစားသူအများအပြား vs. ယှဉ်ပြိုင် & အနိုင်ရဖို့ပိုအကျင့်တို့နှင့် update ကို
* နယူးထိပ်တိုက်တွေ့ဆိုင်စတိုးဆိုင်သီးသန့်ဆုလာဘ် & ဆုကယ်တင်တတ်၏
တိုးမြှင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအောင်သွယ်ပွဲစားနှင့်အတူ * PvP WWE တိုက်ပွဲများ
ယောက်ျား, မိန်းမ, ရောထွေး tag ကိုသင်းတို့အတွက် * နယူးတစ်ပြိုင်နက်ပြိုင်ပွဲ။
NEW WWE Superstar AND 100+ အားလုံး-TIME အကြီးမြတ်
* NEW စူပါစတား & ဂီယာကီ Lynch, NWO Randy ဗေ့ခ်ျနဲ့ Wolfpac လက်နက်ပါဝင်သည်
* အဆိုပါရော့ခ်, ရောမနနျးစံ, Alexa Bliss, ယောဟန် Cena နှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်ယခု Download
* ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းရှေ Rollins, AJ Styles, Shinsuke Nakamura နှင့်ယနေ့ထိပ်တန်းစူပါစတားများအားလုံး
* ဂတိ, ကျောက်ခေတ်အေး Steve Austin, လူအပေါင်းတို့အချိန်သဘောထားခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် icon တွေကိုရွေးချယ်ပါ။
* ကီ Lynch, Alexa Bliss, Asuka နှင့်ထိပ်တန်းအမျိုးသမီးစူပါစတားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဌာနခွဲအတွက်ယှဉ်ပြိုင်။
* အဆိုပါ NWO, နယူးနေ့, DX အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အကြီးမြတ်ဆုံးအုပ်စုဒီမှာပါ။
WWE အခန်းကဏ္ဍ-Play ဂိမ်းလှုပ်ရှားမှုအတွက်
* ဤထူးခြားသော RPG ပဟေဠိတိုက်ပွဲဂိမ်းထဲမှာ XP ကိုဝင်ငွေမှ RPG ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။
* ဦးဝင်းရွေ့လျား customize နှင့်သင့်အဖွဲ့သည်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်တိုက်စစ်ပါတယ်။
* က Epic RPG ဂိမ်းကိုသင်ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
* သင့်ရဲ့စူပါစတား '' စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းငှါး။
* Strategize! ပြိုင်ဘက်ရိုက်နှက်ဖို့အကောင်းဆုံးအတန်းအစားရွေးချယ်ပါ။ Technician, တိုက်စစ်မှုးနှင့်ပိုပြီးအနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။
WWE အဖွစျအပကျြ & ပြိုင်ပွဲ
* သစ်ကိုအပတ်စဉ်အကြိမ်ကြိမ်နှင့်တိုက်ပွဲများဂိမ်းဖြစ်ရပ်များအတွက် WWE Universe ကို Join
* WWE တနင်္လာနေ့ည RAW နဲ့ SmackDown တိုက်ရိုက်ရေးရာတိုက်ပွဲများ
* WrestleMania မှစ. SummerSlam ငှါ, Pay-Per-ကြည့်ရန်ဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်မှုတ်သွင်းဖြစ်ရပ်များ play
* လစဉ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရပ်များ Enter နှင့် WWE စူပါစတားလာမယ့်တက်-and စုဆောင်း
NXT ကနေကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရီနာကှငျးမှ * ခရီးသွားအဆိုပါလမ်းမကြီး
* In-ဂိမ်းယှဉ်ပြိုင်ပွဲအပေါ်-ဝေဟင်ကိုက်ညီအပတ်တိုင်း update လုပ်နဲ့ Pay-Per-ကြည့်ရန်အချိန်ဇယား
MATCH3GAME ။ WWE ရွှေ့
ပြိုင်ဘက်ဖျက်ဆီးဖို့ * ပွဲစဉ်3ကျောက်မျက်
* လက်မှတ် WWE Superstar စားသောက်ဆိုင်ရွေ့လျားကိုသုံးပါ
* ကျောက်အောက်, သဘောထားညှိယူသုံးစွဲဖို့ Upgrade, Styles ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီးပို။
* ပဟေဠိ RPG combo နဲ့ပြီးရွေ့လျား
အဖွဲ့ခွဲ & Alliance, WWE STYLE
* သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆော့ကစားရန်နှင့်အသင်းဖော်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေခြင်းနှင့်ကူညီရန်အဖွဲ့ခွဲကို Join
* သင့်ကိုယ်ပိုင်ဌာနချုပ်အတွက်အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်များနှင့် Strategize
VIP အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် subscription
* WWE ချန်ပီယံလိဂ်သီးသန့်အသင်းဝင်ဖို့ Subscribe
ဓမ္မရာဇဝင်ဘုရင်, DX Triple H ကို, ဒါမှမဟုတ် DX Shawn Michael - * Triple H ကိုအဖြစ် Play
သီးသန့်အကြောင်းအရာ, ပြိုင်ပွဲနှင့်အထူးဆုမှ * Access ကို
အခမဲ့စမ်းသပ်မှုတွေ7ရက် (ရှိလျှင်) အပြီးထပ်တလဲလဲကြေးပေးသွင်းဖို့ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ ကအနည်းဆုံး 24 နာရီကြေးပေးသွင်းမကုန်မီပိတ်ထားမဟုတ်လျှင်စာရင်းသွင်းထားသောစတင်သောအခါအရွေးချယ်ထားသောဆင့်များအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်၏အချိန်ကစျေးနှုန်းနှင့်ငွေပေးချေမှုအချိန်ဇယားမှာပြထားတဲ့ငွေပေးချေမှုသင့်အကောင့်မှတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ပြီးဖော်ပြထားသကဲ့သို့က Auto-ပြည့်ကြလိမ့်မည် ကာလ။ သက်တမ်းတိုးငွေပေးချေမှုသင်ရွေးချယ်ထားသောတူညီတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ငွေပေးချေမှုအချိန်ဇယားအပေါ်စာရင်းသွင်းခြင်းကာလမကုန်မီ 24 နာရီအတွင်းတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ အခမဲ့စမ်းသပ်မှုတွေ၏အသုံးမပြုတဲ့ဝေမျှစာရင်းသွင်းခြင်း၏ဝယ်ယူအပေါ်သို့ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ သငျသညျ subscriptions ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သင့်ရဲ့ device အကောင့် setting တွင် Auto-သက်တမ်းတိုးကို turn off နိုင်ပါတယ်။
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: http://scopely.com/tos/
WWE Champions 2019 အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
WWE Champions 2019 အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
WWE Champions 2019 အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
WWE Champions 2019 အား အခ်က္ျပပါ
lmbs62 စတိုး 63 173.9k
WWE Champions 2019 ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း WWE Champions 2019 အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.375
ထုတ်လုပ်သူ Phase One Games LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://scopely.com/legal/
Release date: 2019-07-17 18:19:28
လက်မှတ် SHA1: ED:5A:18:45:9A:26:E0:48:D7:B5:D0:43:F5:2B:28:EC:67:FB:A0:AC
အဖွဲ့အစည်း (O): Kung Fu Factory
WWE Champions 2019 APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ